I-Tanzania isete iKhomishini ye-UNWTO ye-Afrika kunyaka olandelayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » I-Tanzania isete iKhomishini ye-UNWTO ye-Afrika kunyaka olandelayo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ugqirha Ndumbaro wase Tanzania kunye no UNWTO Pololishkavili
I-Tanzania imiselwe ukubamba iKhomishini ye-UN yeZizwe eziManyeneyo yezoKhenketho (i-UNWTO) ye-Afrika ngo-Okthobha wonyaka ozayo.
I-UNWTO ixhase iTanzania njengomgqatswa kunye nomgcini we-65 yeKhomishini ye-UNWTO ye-Afrika yowe-2022 emva kokuba eli lizwe lase-Afrika livakalise ukulungela kwalo ukusingatha indibano yezokhenketho ebikwinqanaba eliphezulu.
Intlanganiso kulindeleke ukuba ibanjelwe e-Arusha, isixeko sabakhenkethi kumantla eTanzania.
Abathathi-nxaxheba baya kufumana amathuba okundwendwela iipaki zezilwanyana zasendle kunye neNtaba iKilimanjaro, ngaphandle kweendawo zenkcubeko ezininzi kule ndawo.
I-UNWTO ivumile iTanzania ukuba isingathe le ntlanganiso ngexesha leentlanganiso zabaphathiswa ezazibanjelwe eNamibia naseCape Verde ngoJuni nasekuqaleni konyaka apho abaphathiswa bezokhenketho base-Afrika babehlanganisene bexoxa ngeqonga lezokhenketho kwilizwekazi kwilizwekazi.
Unobhala Jikelele we-UNWTO Mnu Zurab Pololikashvili wayesamkele isicelo ngu Thanzaniya umsingathi wentlanganiso ngethuba leNgqungquthela yeBrand Africa neyayiququzelelwe yi-UNWTO neyayibanjelwe eWindhoek (Namibia) ngeyeSilimela kulo nyaka.
Intlanganiso yeBrand Africa yatsala abaPhathiswa bezoKhenketho abali-15 kweli lizwekazi abavuma ukusebenzisana ukuze bafumane isisombululo esiza kuvuselela ushishino lwezokhenketho lweli lizwe oluchatshazelwe kakubi sisifo sikaCoronavirus (COVID-19).
Abaphathiswa bathembise ukusebenza kunye emva koko baseke ingxelo entsha yeqonga lophuhliso lokhenketho kwilizwekazi lase-Afrika.
Isigqibo soku vuma iTanzania Umgqatswa oza kubamba iKhomishini yama-65 ye-UNWTO yeNtlanganiso ye-Afrika kunyaka ozayo wenziwa kwiNtlanganiso ye-UNWTO ye-UN ye-Afrika eyayibanjelwe eSal Island yase-Cape Verde kwiveki ephelileyo.
"Sixoxile malunga nentlanganiso yama-65 yoMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) eza kubanjelwa eTanzania eza kubeka eli lizwe kwimephu yezokhenketho," utshilo uMphathiswa Wezokhenketho eTanzania uGqirha Damas Ndumbaro.
Intlanganiso ehleliweyo yonyaka olandelayo kulindeleke ukuba itsale abaphathiswa bezokhenketho abangama-54 kuwo onke amazwe ase-Afrika.
UMphathiswa wayekhokele igqiza laseTanzania kwintlanganiso eyayinyule eli lizwe laseAfrika ukuba lilungu leNkqubo ye-UNWTO kunye neKomiti yoHlahlo-lwabiwo mali (PBC).
Amazwe angamaLungu e-UNWTO ase-Afrika aza kusebenzisana ukuseka ibali elitsha lezokhenketho kwilizwekazi liphela.
Ukuqonda ngcono ukubanakho kwezokhenketho ukuqhuba ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, i-UNWTO naMalungu ayo bayakusebenzisana neManyano ye-Afrika kunye necandelo labucala ukukhuthaza ilizwekazi kubaphulaphuli kwihlabathi liphela ngokusebenzisa amabali aqinisekileyo, ajolise ebantwini kunye nophawu olusebenzayo.
Njengokhenketho olwamkelweyo njengentsika ebalulekileyo yophuhliso oluzinzileyo nolubandakanyayo kwilizwekazi, i-UNWTO yamkele abathunywa abakwizinga eliphezulu kwiNkomfa yeNqila yokuqala yokuQinisa iBrand Africa ebibanjelwe eNamibia.
Le nkomfa ibibonisa ukuthatha inxaxheba kobunkokheli bezopolitiko belizwe elisingethe iNamibia, kunye neenkokheli zikarhulumente nezabucala ezivela kwilizwekazi liphela.
UNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili wamkele ukuzimisela okuqhelekileyo kokucinga kwakhona kunye nokuqala kwakhona ukhenketho.
"Iindawo zaseAfrika kufuneka zikhokele ekubhiyozeleni nasekukhuthazeni inkcubeko edlamkileyo yelizwekazi, amandla olutsha kunye nomoya woosomashishini, kunye nesityebi sokutya," utshilo.